१० लाखमा किने घर, भित्र यस्ता-यस्ता महँगा चीज फेला परेकी बने करोडपति ! – Dailny NpNews
१० लाखमा किने घर, भित्र यस्ता-यस्ता महँगा चीज फेला परेकी बने करोडपति !
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २१, २०७७ समय: १५:४५:३९
एजेन्सी – क्यानाडाका एक प्राचीन सामानहरु बेच्ने पसलका मालिकले १० हजार डलर आसपासमा एक घर किनेका थिए। उक्त घरमा उनले यस्ता-यस्ता सामान फेला पारे की उनी चकित नै परे। मात्रै १० हजार डलरमा किनेको घर भित्र धेरै नै दुर्लभ चीजहरु भेटेपछि उनी अहिले दंग छन्।
के हो घटना ?मिस्टर आर्चवल्ड एक एन्टिक पसलका मालिक हुन्। लामो समय देखि उनी प्राचीन सामानहरु किनबेच गर्दै आएका छन्। उनले पूराना घरहरु पनि किन्ने गरेका छन्। केहि समय अगाडी मात्रै उनले एक स्थानीय संगीत शिक्षकको घर किनेका थिए। घरमा हुने पियानो तथा अन्य सांगेतिक सामग्रीहरुका लागि उनले उक्त घर किन्ने निर्णय गरेका थिए।
तर उक्त घरमा सांगेतिक सामग्रीहरु मात्रै नभई अन्य चीजहरु पनि फेला परे। त्यहाँ डिजाइनर लुगा, दुर्लभ सिक्का, सुन र हीराको औठीले भरिएको झोला, नगद र चाँदीको डलर भएको पर्स समेत फेला परेको थियो। त्यस घरमा आर्चवल्डले करिब १०० वर्ष अगाडीको एक सिक्का समेत फेला पारेका थिए। त्यस घरमा फेला परेका सामानहरु बेच्ने हो भने २ लाख डलर भन्दा बढी पर्न जाने बताइन्छ।